Madaxweynaha Maamulka Somaliland oo Shir Beeleed ku Qabtay London – Rasaasa News
Madaxweynaha Maamulka Somaliland oo Shir Beeleed ku Qabtay London
Nov 13, 2011 ethiopia, Madaxweynaha Maamulka Somaliland oo Shir Beeleed ku Qabtay London, Somali
London, November 13, 2011 [ras] – Wariye ka tirsan shabakada rasaasa.com, oo goob joog ka ahaa shir habeenkii xalay loogu qabtay London, madaxweynaha maamulka Somaliland, ayaa noo soo diray war ku saabsan kulanka.
Shir si weyn loo soo agaasimay ayaa habeenkii xalay ahaa Jaaliyada maamulka Somaliland ku qabtay London.
Arimaha ugu muhiimsanaa ee shirka ayaa ahaa, in uu madaxweyne Siiraanyo u sharxo qurba joogta maamul gabaleedka uu madaxda ka yahay. Arimaha ay ka midka yihiin; samaynta maamul gabaleedka Awadal State, Shirka Khaatumo labo  ee SSC ay ku leedahay magaalada taariikhiga ah ee Taleex, xidhiidhka Somaliweyn, iyo khilaafka xadka ee u dhaxeeya dawlada degaanka Somalida Ethiopia iyo maamulka Somaliland.
Shirka oo lagu qabtay Grange Tower Bridge Hotel, oo ku yaal bariga magaalada London, waxaa kharajka bixisay shirkada xawaalada ee Dahab-shiil [dhiig-shiil]. Waxaa goobta shirku ka dhacayey si xoog leh u soo buux dhaafiyey beesha madaxweynuhu ka soo jeedo, oo isaga timid dhamaan dalalka Yururb, sida ay ii xaqiijiyeen dadka shirka fadhiyey.
Waxaan shirka iyagu gabi ahaanba imanin beelaha Dhulbahantee, oo hore u samaystay maamul gabaleedka Sool, Sanaag iyo Cayn [SSC] iyo Beesha Sama-roon oo hore uga tirsanayd maamulka beesha Isaaq ee Somaliland, oo bishan November 5, 2011, isla magaalada London ku samaystay maamul gabaleed lagu magacaabo Awdal State.
Madaxweyne Siiraanyo oo joogay Ingriiska tan iyo dhamaadkii bishii October, ayuu safarkiisu la xidhiidhay arimo caafimaad, oo ah xanuun dhinaca beerka ah oo uu ka wadi waayey hawlihii maamulka, dhawr goor oo horana u tagay Ethiopia xanuunkan balse waxba laga qaban waayey.
Qurba joogta beeshiisa oo kolkii hore moodayey in ay dal xor ah yihiin, ayey arimuhu sidii ay moodayeen noqon la,a yihiin, waxayna ka codsadeen madaxweyne Siiraanyo in uu la hadlo kana qanciyo arimo badan oo ay tabayaan.
Madaxweyne Siiraanyo oo habeenkii xalay ahaa la hadlayey beeshiisa ayaa yidhi “somali baynu nahay, diidina mayno, Somaliland inagaa leh cidina inagama qaadan karto.” “wax waliba nidaam la raaco ayay leeyihiin kaman boodi karo nidaanka, laakiin waa muqadas jiritaanka Somaliland.” hadalkaas oo uu ula jeeday gabalka inagaa leh laakiin hadaynu xoriyad qaadan iyo hadii aynaa qaadan waxay ku xidhan tahay dawlad ka dhalata dalka Somaliya.
Siiraanyo, ayaa yidhi kama xumin in la dhiso Awdal State, waayo waxaan ogolaanay nidaamka xisbiyada badan Awdal State-na waxay ka mid tahay axsaabta la ogolaaday. Waxaad la socotaan in SSC ay isu rogtay xisbi mucaarad ah xafiisna ka furtay Hargeyysa.
Madaxweyne Siiraanyo ayaa aad ugu dheeraaday dhinaca xadka iyo dalka Ethiopia, isaga oo yidhi “waxaad la socotaan in Ethiopia aynu ku yeelanay afar degmo , gabal in aan ku yeelanana waan ku rajaweynahay.” “inta ay arimaahsi socdaana colaadi way jiri, sodon sano ka hor hal degmo ayey beeshu ku lahayd Ethiopia.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxaa uu Siiraanyo yidhi “wasiirkii hore ee arimaha dibada Somaliland Cabdulahi Maxamed Ducaale, oo hatan jooga Daafuur wax badan buu ka qabtay xidhiidhka dhinaca Ethiopia. Wasiirku wuxuu ku dadaalay in Hargeysa laga furo Jaamacad ku shaqaysa manhajka dalka Ethiopia. Arintaasi waxay sahlaysaa in ay jaamacadu soo saarto dad aqoon leh oo ka shaqayn kara Ethiopia iyo Somaliland.”
Ciidamada Ethiopia mar mar way soo galaan xuduudkeena iyaga oo raadinaya dad nabad diid ah, wax dhib ahna uma aragno soo galitaankooda, waayo inaga ayaa labada dhinacba degan.
“Sidii ay nabada u qaateen qaar ka mid ah kuwii hore Ethiopia ula dagaalami jiray, waxaa dhici karta in ay waxyaabo kale soo baxaan, taasna waxay u baahan tahay in siyaasad laggaga gudbo” ayuu yidhi Siiraanyo.
Su,aalaha ugu badan ee ay dadku waydiinayeen, ayaa ku saabsanaa xidhiidhka isaga iyo Somaliweyn iyo maamul gabaleedyada ay samayteen beelihii hore uga tirsanaa maammulka Somaliland.
Waxayna waydiiyeen maamulo aaminsan Somaliweyn ayaa ka dhex abuurmay Somaliland, marka ma dhici kartaan in Somaliland ka go,odo Somaliya? Jawaabta uu bixiya ayaa u badnayd aynu dhawri sida arimuhu u dhacaan.
Madaxweyne Siiraanyo waxaa shirka ku weheliyey wasiirkiisa arimaha dibada oo ay labadooduba deganaansho ka haystaan dalka Ingriiska. Si weyna waxaa loogu xantaa labadoodaba in ayna dan iyo muraad ka lahayn sii jiritaanka maamulka Somaliland balse ay qiimaynayaan sidii ay Somaliya uga dhismi lahayd dawlad Somali midaysa.